दाङमा फेरि अर्काे घटनाः किरिया बसेकि आमाको बिलौना, साथीले नै यस्तो गरे… त्यो कलिलो बुहारी र ८ महिने नातीको भाग्य यस्तो? (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > अपराध > दाङमा फेरि अर्काे घटनाः किरिया बसेकि आमाको बिलौना, साथीले नै यस्तो गरे… त्यो कलिलो बुहारी र ८ महिने नातीको भाग्य यस्तो? (भिडियो सहित)
admin June 1, 2020 June 1, 2020 अपराध, भिडियो, समाज 0
छोरा भर्खर ८ महिनाका मात्र छन् । त्यो छोराले भनेको बाबा शब्द पनि सुन्न नपाई एक युवकको ज्यान गयो । साथीले नै बोलाएर ह त्या गरे । यो दागंको घटना हो । केही दिन यता रुकुमको घटनाले मुलक तातीरहेको छ । यो समयमा मुलुकका अन्य स्थानमा यस्तो घटना भइरहेका छन् । मजदिप भोजलाई साथीहरुले ढुंगाले हा नेर ज्यान लिए । उनी मृत अवस्थामा खोलाको किनारमा फेला परेको थियो । जोसंग संगत गर्थे उनीहरुले नै मनदिपको ज्यान लिए ।
८ महिनाको छोराको तोते बोली पनि सुरु भएको थिएन । अर्का एक छोरा ८ वर्षका छन् । घरमा श्रीमती, आमा र एक दाजु छन् । आमा बेलुवा बस्छिन्, त्यो भन्दा अलिकती टाढा छोराहरु बस्छन् । आमालाई विहानै शनिवार फोन आयो, तपाई छिटो आउनु भनेर बोलाए । सानो छोरा लिएर घटनास्थल गएकी आमाले त्यो छोराको अनुहार हेर्नै सकिनन् ।
मेरो छोरा एक दिन अगाडी ममी भन्दै घरमा पसेको थियो, भोली पल्टै यस्तो अवस्था देखेपछि छोराको अनुहार नै हेर्न सकिन् । अकस्मान भएको त्यस्तो घटनाले आमा विछिप्त छन् । केही वर्ष अघि श्रीमान गुमाएकी आमाले जेठो छोरालाई यसरी गुमाउनुपर्दा आफ्नो मन भुलाउने बाटो पनि छैन । निकै सज्जन छोराको कोही सत्रु पनि छन् जस्तो लाग्थेन । तर कसले यस्तो किन गरेको हो बुझ्न नसकेको आमाको भनाइृ छ ।